လက္ထပ္တာ ၁ ႏွစ္ေလာက္ပဲရွိေသးတဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ - TAWTHU
အႏွစ္ ၂၀ လုပ္အားခနဲ႔ တန္ဖိုးညီမွွ်တဲ႔ အၾကံေပးစကား [ ၃ ] ခြန္း
#Credit to Original Uploader.
အနှစ် ၂၀ လုပ်အားခနဲ့ တန်ဖိုးညီမျှှတဲ့ အကြံပေးစကား [ ၃ ] ခွန်း
အဲလိုနဲ့ မနက်ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ သူအိမ်သွားပြီး တံခါးခေါက်လိုက်တယ်။ သူ့မိန်းမက တံခါးထွက်ဖွင့်ပေးပြီး သူ့ယော်ကျားမှန်း သိတာနဲ့ ချျုံးပွဲချ ငိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယောက်ကျားက သူ့မိန်းမကို စောင့်တွန်းလိုက်ပြီး နင့်အကောင် ဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ မိန်းမက ဘယ်အကောင်လဲဆိုတော့မှ ညက နင်နဲ့ဖက်နေတဲ့ အကောင်လေဆိုတော့မှ။ အဲဒါရှင့်သား ရှင့် သိရဲ ့လားလို့ ငိုပြီးပြန်ပြောတယ်။ ရှင်ထွက်သွားပြီး ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ ကျမမှာ ကိုယ်ဝန်ကျန်ခဲ့မှန်းသိတယ်။
​ကိုယ့္မ်က္စိေရွ႕မွာ ဓာတ္လိုက္ေနတဲ့သူကိုေတြ႔ရင္ ဒီအခ်က္ေတြကို ျပဳလုပ္ေပးပါ….!
​ေရႊျပားခတ္​ျခင္​း ၂ ႏွင္​့ ​ေရႊျပားခတ္​စကၠဴ ျပဳလုပ္​နည္​း